Bentley, Leica na PlexEarth so na akụkọ kacha atọ ụtọ na-amalite na Febụwarị 2019. Ọzọkwa, anyị na-egosi na anyị achịkọtara ihe omume 21 na-atọ ụtọ na-abịa, bụ nke obodo niile nke ndị ọkachamara na mbara igwe nwere ike isonye. Offọdụ isiokwu a tụlere na ihe omume ndị a bụ: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
UTM ahazi usoro egosipụta na Google Maps
O yighị ka ọ dị, mana akụ PlexScape Web Services wepụtara iji gbanwee nhazi ma gosipụta ha na Google Maps bụ mmega ahụ na-atọ ụtọ iji ghọta etu usoro ịhazi mpaghara dị iche iche nke ụwa si arụ ọrụ. Maka nke a, a họpụtara mba ahụ site na panel nke na-egosipụta Coordinate Systems na mgbe ahụ ...
Naanị taa ka ewepụtara nsụgharị Spani nke PlexScape, nke na-abụghị akwụkwọ Greek mbụ ya dịkwa na Bekee na French. Ọ dị anyị ka mmegharị ahụ dị mkpa, nke anyị hụrụ na-egosi site na mbụ, ebe Plex.Earth n'ime ihe karịrị asụsụ 10 esonyelarị na Spanish na ụdị nke 2.0.
A post n'etiti ihe karịrị ọnwa 50
Mgbe ihe karịrị ọnwa 50 nke ederede, nke a bụ nchịkọta. Na ileba anya mbu, agbanyeghi na nhota a dabere na ihu akwukwo, ihe redio bu: 13 ha aghaghi ime ya na AutoCAD ma obu ngwa ya. Otu isiokwu nke na-adịgide adịgide, n'etiti akụkọ nke nsụgharị ọhụrụ, iji ya eme ihe na obodo ...
Apụta, INDEX, My egeomates